China Aluminium CNC Kutendeuka Zvikamu Mugadziri uye mutengesi | Walley
Cnc Turning Zvikamu:
Yedu CNC lathes inogonesa yakakwira kumhanya uye mhando yepamusoro kutendeuka kwemaviri epurasitiki nesimbi. Maitiro ekushandura anotendera akaomesesa ekunze mageometri uye mabhure emukati kugadzirwa. Yedu yekutendeuka inokwanisa kune imwe-offs kuburikidza ne batch kugadzirwa kwezvinhu zvako. Zvakare tendeuka-yekugaya makemikari muchina nechishandiso shongwe ine yepamusoro hunyanzvi.
Chakanakira chijana-azvikuya muchina
(1) Pfupisa chigadzirwa kugadzira maitiro cheni uye kugadzirisa kugadzirwa kushanda. Kutendeuka uye kugaya kusanganisa kugadzira kunogona kupedzisa zvese kana zvakawanda zvemaitiro ekugadzirisa panguva imwe chete, nokudaro kupfupisa zvakanyanya chigadzirwa chigadzirwa cheni. Nenzira iyi, kune rumwe rutivi, nguva yekubatsira yekukonzera inokonzerwa nekushandurwa kwekadhi rekumisikidza yakadzikiswa, uye iyo yekugadzira kutenderera uye yekumirira nguva yekugadzirisa zvishandiso zvinoderedzwawo, izvo zvinogona zvakanyanya kugadzirisa kugadzirwa kwekuita.
(2) Kuderedza uwandu clamping uye kuvandudza kugadzira kunyatsoita. Iko kuderedzwa kwehuwandu hwekadhi kurodha kunodzivirira kuunganidzwa kwezvikanganiso nekuda kwekushandurwa kwenzvimbo dzekumisikidza mabenchimendi. Panguva imwecheteyo, yakawanda yekushandura-yekugaya yemakomponi ekugadzirisa michina ine basa rekuona pamhepo, iyo inogona kuona iko-munzvimbo yekuonekwa uye kunyatso kudzora kwemashoko akakosha mukugadzira maitiro, nokudaro ichivandudza kugadzirisa kunyatso kweichi chigadzirwa.
(3) Deredza nzvimbo yepasi uye mutengo wekugadzira. Kunyangwe mutengo weiyo imwechete unit yekushandura-yekugaya yemakomponi ekugadzirisa michina iri mudiki, nekuda kwekufupisa kweyekugadzira maitiro cheni uye kudzikiswa kwemidziyo inodikanwa kune zvigadzirwa, pamwe nekuderedzwa kwenhamba yezvigadziriso, nzvimbo yemusangano uye michina yekugadzirisa mutengo, inogona kudzora zvakaringana zvinhu zvakagadziriswa mutengo wekudyara, mashandiro ekugadzira uye manejimendi "
Cnc machine kutendeuka zvikamu
MAX cnc machine OD pa300X300mm
Kuora kwepamusoro: Ra≤0.1μm
Dhizaini fomati: PDF, JPEG, AI, PSD
Min kubvumidza kudzora pa +/- 0.01mm.
Maitiro: Tsika cnc machine, Dzimwe nzira dzinosanganisira inopisa stamp yekuchengetedza, yakamanikidzwa kugadzira
Chigadzirwa chakatumidzwa Cnc machine kutendeuka Zvikamu
Saizi Yakagadziriswa saizi
Nemazvo +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Kushanda Yekuvhiya maski muchina
Chitupa ISO9001: 2008, IATF16949, ROHS
Unyanzvi hwezvinhu Aluminium, Brass, Bronze, Mhangura, Yakaomeswa Simbi, Precious Metals, Stainless Simbi, Simbi Alloys
Type Kugadzira, Kuchera, Kuchenesa / Kemikari Kugadzira, Laser machine, Kugaya, Mamwe Machining Services, Rapid Prototyping, Turning, Wire EDM
Chimiro chimiro Kuenderera mberi
1) Kupa vhidhiyo uye mafoto ane ruzivo zvakasununguka panguva yekugadzirwa.
2) Kuburitsa zvinoenderana nekurongeka kwemadhirowa, kuyerwa kwegungano kuona basa uye kudzora kwemhando yepamusoro kuona 0 mwero wekudzoka
3) 99% maodha anogona kuve nechokwadi chekuendesa nguva
4) Zvishandiso zvatinoshandisa zvakanaka
5) 24 maawa epamhepo sevhisi
6) Iyo yemakwikwi fekitori mutengo neiyo imwecheteyo mhando uye sevhisi
7) Iyo yakakodzera kwazvo kurongedza nzira kune akasiyana zvigadzirwa.
Pashure: EDM machine Zvishongedzo
Zvadaro: Aluminium CNC yekugaya zvikamu
Aluminium Cnc Kutendeuka Zvikamu
Aluminium Cnc Inoshandura Sleeve
Cnc Aluminium Yakatendeuka Chikamu
Cnc Aluminium Inoshandura Zvikamu
Cnc Kutendeuka Aluminium Chikamu